Semalt Expert - 7 Tsy maintsy manana WordPress Plugin karazana
Tsy afaka mandà ny zava-misy isika fa mihoatra ny 25% ny vohikala sy ny bilaogy dia mampiasa WordPress, ka mahatonga azy io ho rafitra fitantanana tsara indrindra amin'ny aterineto. Indray mandeha ny blogger.com no safidy tokana ho an'ny mpividy sy ny mpanoratra, fa ankehitriny dia WordPress dia be mpampiasa sy tia azy noho ny fahafahany manitatra ny endriky ny tranonkala iray. Amin'ny teny tsotra, afaka manampy mora amina tselika an-jatony ianao ao amin'ny tranokalanao WordPress ary afaka manatsara ny fahombiazany. Ny plugins dia nahatonga azy ireo ho mora ho an'ireo mpandahateny sy ireo tsy mpandrindra mba hananganana sy hitazonana tranonkala matihanina. Tsy mila fahalalana ara-teknika hanombohana tranonkala ianao satria ny WordPress plugins dia misy mba hahatonga ny asanao ho mora kokoa sy haingana kokoa noho ny hatramin'izay. Ny sasany amin'ireo WordPress plugins dia manampy antsika hampiroborobo ny tranokala na ny fifamoivoizana blôgy raha ny hafa manampy antsika hanatsara ny taham-pivoarana ary hampihenana ny taham-pitenenana.
Oliver King, manam-pahaizana lehiben'ny Semalt Digital Services, dia namorona ny karazan-drakitra 7 karazany lehibe indrindra tokony ho fantatrao.
Ny caching dia iray amin'ireo singa tsara indrindra sy malaza indrindra amin'ny orinasanao an-tserasera. Mety hampihena ny fotoana fametrahana ny pejy Internet anao izany ary hanome traikefa an-tserasera. Ankoatra izany, dia manoro hevitra anao ny fomba hampihenana ny tahan'ny fialana amin'ny tranonkalanao ianao ary mamela fiantraikany tsara amin'ny fitaovam-pikarohana indrindra indrindra Google. Ny haingam-piasan'ny tranonkala dia ambony kokoa noho ny lalao môtera fikarohana. Tsy tokony hahagaga raha miezaka ny miala amin'ny tranokalanao ireo mpitsidika raha tsy mameno ao anatin'ny dimy segondra izy. Izany no mahatonga anao hanatsara ny fametrahana haingana ny tranokalanao amin'ny karazana plugins. Na dia misy safidy maro aza, fa ny WordPress plugins tsara indrindra dia W3 Total Cache sy WP Super Cache.
2. Safidy an-tsoratra
Tokony ho renao fa vola daholo izany rehetra izany. Izany no inoan'ny mpandraharaha mahomby. Ny lisitry ny mpanjifa dia afaka manampy anao hampitombo ny orinasa amin'ny haavon'ny haingam-pandeha kokoa ary mety hahatonga anao hampiakatra ny vidin'ny varotra. Hamela ny mpitsidika amin'ny tranonkala sy bilaogy haingana ihany koa ireo webmasters..Ny plugins tsara indrindra amin'ny tranokala WordPress dia ny Sign-Up sy WP Subscriber Pro.
Raha te hampandeha ny fifamoivoizana organika amin'ny tranokalanao ianao na hanatsara ny fizotry ny fikarohana, dia tokony hanatsara ny pejy Internet an'ny SEO ianao. Ny fampidirana ireo lohatenin'ny metà, ny famaritana sy ny famandrihana meta dia manohina sy mampiahiahy, fa ny fampidirana ireo plugins ao amin'ny tranokalanao dia hanala ny volom-bavaka ary hanampy anao hampiditra ny fampahalalana ilaina amin'ny fotoana tsy misy. Ny Plugins tsara indrindra sy malaza indrindra amin'ny WordPress amin'ity sehatra ity dia WordPress SEO avy amin'ny Yoast, SEO iray SEO, ary SEO Ultimate.
Raha ny zava-misy dia tokony ho fantatry ny webmasters rehetra momba ny fisian'ny tranonkala. Raha tsy misy fahalalana marina momba ny kalitaon'ny fifamoivoizanao, dia tsy afaka mandray ny fanapahan-kevitra ara-barotra marina ianao. Izany no antony tokony hampidiranao ny tranonkalanao ary hametraka Google Analytics toy ny fitaovana fanadihadiana eo aminy. Jetpack dia tsara ihany koa ny mandeha miaraka satria maharay vaovao mahasoa anao izy nefa tsy mamorona misavorovoro ho anao.
5. Pejy fandraisana
Ireo pejin'ny tanjon'ny lalao dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanatsarana sy fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po. Raha te-hikolokolo ny varotra fanampiny ianao dia mitondra mankany amin'ny marketing maimaim-poana, marketing ara-tsosialy, ary mailaka marketing, dia tokony hahazo fahombiazana ny pejy fanentanana. Ny pejin-tranonkala iray dia afaka mandresy lahatra ireo mpampiasa mba hanao sonia ny gazetinareo ary hahatonga ny fividianana azo atao. Ao amin'ny WordPress, misy plugins isan-karazany hanampy anao hamorona pejy mandresy lahatra, fa ny pejy Landing, Zedity ary Optimize Press 2.0 no tsara indrindra.
6. Lahatsoratra mifandraika sy malaza
Saika ny webmasters rehetra dia miady amin'ny olana amin'ny taham-pitenenana ambony. Tonga any amin'ny tranokalanao ny mpampiasa, mamaky ny votoaty, tiany ary mizara izany, ary mivezivezy any amin'ny toerana hafa. Izany dia mitranga rehefa tsy mitantara ny tantaranao ianao. Ny mpitsidika dia tsy handany mihoatra ny telo segondra ao amin'ny tranonkalanao ary mila mampihena ny taham-pitenenana ianao mba hahazoana tsaratsara kokoa ny fikarohana. Ny plugins izay malaza indrindra amin'ny WordPress izay afaka mametraka ny lahatsoratra na lahatsoratra mifandraika amin'ny tranokalanao dia WordPress Related Posts, aryYidia hafa izay Related Plugin.
7. Ny fidirana amin'ny media sosialy
Ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy dia manampy antsika betsaka amin'ny varotra an-tserasera. Saika ny tranonkala rehetra dia mifantoka amin'ny fitaterana fifamoivoizana amin'ny tambajotra sosialy Miaraka amin'ny olona sivy amby sivifolo mampiasa Facebook sy Twitter mba hifandraisana amin'ny fianakaviana sy ny namana, dia tsy misy tsara kokoa noho ny fampiasana plugins haino aman-jery sosialy hiditra aminy. Ny tsara indrindra WordPress plugins amin'io lafiny io dia Ultimate Social Deux, Floating Social Bar, ary ny Social Links Source .